Lavazza Idola Umshini Wekhofi Uluhlobo - Umagazini Design
Umshini Wekhofi Uluhlobo Isixazululo esiphelele sabathandi bekofi abafuna isipiliyoni esifanele se-espresso sase-Italiya ekhaya. Isixhumi esibonakalayo sokusetshenziswa esibonakalayo somsebenzisi ngempendulo ye-acoustic sinezinto ezine ezikhethiwe nomsebenzi wokuqinisa izinga lokushisa onikeza isipikha esenziwe ngalo lonke ukunambitheka noma umcimbi. Umshini ukhombisa amanzi alahlekile, isitsha se-cap esigcwele noma isidingo sokwehla ngezithonjana ezingezekile ezikhanyisiwe futhi ne-trip tray ingalungiswa kalula. Idizayini enomoya wayo ovulekile, ukukhombisa okusezingeni eliphezulu nokucacisa okwedlula zonke kungukuvela kolimi lwefomu elisungulwe likaLavazza.
Igama lephrojekthi : Lavazza Idola, Igama labaklami : Florian Seidl, Igama leklayenti : Lavazza.
Umshini Wekhofi Uluhlobo Florian Seidl Lavazza Idola